I-PSL ihlalele ethembeni lokuthi imidlalo izoqedwa
MENGAMELI weSAFA uDanny Jordaan, ungqongqoshe wezobuCiko nezeMidlalo uNathi Mthethwa noSihlalo wePSL u-Irvin Khoza okuzomele bahlanganise amakhanda basebenzisane ukuthola indlela isizini engaphothulwa ngayo kumaligi ebhola akuleli.
sihle ndlovu | April 4, 2020
SINZIMA isinqumo okungase kudingeke sithathwe yiPremier Soccer League (PSL) mayelana nemidlalo ye-Absa Premiership neyeGladAfrica Championship emisiwe ngenxa yeCoronavirus.
Imidlalo yePremiership neyeChampionship imiswe ngesikhathi seyivutha kakhulu, sekubhekwe ukuthi yiliphi iqembu elizoshaya intambo ngoMeyi kuwo womabili amaligi. Okwenza kube nzima kakhulu kwiPSL wukuthi akwaziwa ukuthi iCorona, ezilokhu zikhula mihla namalanga izibalo zabahaqwe yiyo, izodamba nini.
Uma iqhubeka indaba yeCorona iPSL ingase iphoqeleke ukuthatha isinqumo esinzima sokuthi isizini ka-2019/2020 ifane nento engekho nengabalwa. Lokhu kungasusa omkhulu umsindo ngoba amaqembu afana neKaizer Chiefs, Mamelodi Sundowns, neSuperSport United, azibona esethubeni elikahle lokuwina isicoco seligi.
I-Orlando Pirates nayo ngeke ishiywe ngaphandle kulokhu kodwa kubukeka kungabalandeli beChiefs abangasala bekhala kakhulu ngoba isesicongweni (selokhu kuqale isizini) futhi kulo nyaka ibigubha iminyaka ewu-50 yasungulwa. Abalandeli baMakhosi bayakholwa wukuthi lena yisizini abazoqukula ngayo isicoco seligi okokuqala ngemuva kweminyaka eminingi lomisile eNaturena.
Ngaphandle kozowina isicoco seligi inkinga enkulu engabhekana nePSL uma ingaqhubeki imidlalo wukuthi amaqembu okufanele adliwe yizembe angaphunyuka okuyinto engeke yehle kahle kulawo ayibamba kwiChampionship. Phela lokhu kungabe kusho ukuthi amaqembu afana ne-Ajax Cape Town, Swallows FC noThongathi FC, azihola phambili ngokulandelana, abedlalela ubala yonke isizini.
Lokhu ngeke kugcine kwiChampionship ngoba namaqembu agijima kwi-ABC Motsepe League kungadingeka aqale phansi. Njengamanje bonke abantu kunobhutshuzwayo bathandazela ukuthi amaligi aqedelwe ukuze ungasuki umsindo. Ambalwa amaqembu angathi wona ngeke abe nandaba uma kungathiwa isizini ka-2019/2020 ithathwa njengento engekho.
Okwamanje kuhlalelwe ethembeni lokuthi imidlalo izoqedelwa ukuze izikhulu eziphethe zingazitholi sekufanele zithathe izinqumo ezinzima, ezingase zisuse ukukhuluma.